ငါ့ကိုနင်မေ့သွားတဲ့အခါ..သေချာတာတစ်ခုက..ငါနင့်ကိုမမေ့ပါ: August 2008
Posted by mhyaw lint at 7:46 PM
Labels: ယောကျာင်္းတစ်ယောက် လုပ်ရမဲ့အလုပ်လား
ပြီးတော့ … “မငိုပါနဲ့ကလေးရယ်တဲ့”
ဒို့ ကိုဝေဖန်ခဲ့တယ် ။
အခုတော့ . . . မင်းပြောတဲ့အတိုင်း
မင်းကဒို့ရဲ့အဝေးဆုံးတစ်နေရာမှာ သွားနေတယ် ။
ဒို့ဘ၀ရဲ့ . . . နိဒါန်းနဲ့နိဂုံးဟာဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါကောင်လေးရာ . . . ။
+ .. .. .. .. .. .. +.. .. .. .. .. .. .. +.. .. .. .. .. .. +
တကယ်လို့ .. မင်းမှာ တကယ်ဒဏ်ရာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်
ငါ့မှာက . . . ချစ်သူကိုလွမ်းရလို့
အဝေးကြီးက .. ချစ်သူကို
ဘယ်လိုစိတ်ချမှုမျိုးတွေ .. ငါ့ပေးရမှာလဲ
ငါ့ကိုလွမ်းခွင့် .. တမ်းတခွင့်ပေးတဲ့အတွက်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ . . . မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို
ငါ့နှလုံးသားက ထူးဆန်းစွာ မင်းကိုမှ
အခုတော့ .. ငါလွမ်းနေရပြီးပေါ့
ရင်ခုန်မိတဲ့ … နှလုံးသားကိုတော့
အပြစ်မတင်ဝံ့ပါဘူး . . .
ငါ့ဘာသာငါ လွမ်းနေတာက ကောင်းပါတယ်
နှိပ်စက်တော့မယ်ဆိုရင် .. ကဗျာကယာ
အကူအညီတောင်းမိတာက 119 ကိုမဟုတ်ပါဘူး
မင်းဆီင်္ကိုပါ … မင်းဓါတ်ပုံလေးထုတ်ကြည့်လို့“
ရင်ခုန်ခြင်းတွေ .. ဆီချက်ညီညီနဲ့
ငါ့နှလုံးသားမှာ .. ကခုန်ခဲ့ပြန်ပါတယ် မိန်းခလေးရေ
Posted by mhyaw lint at 7:42 PM
“ ကျွန်တော်ရေးတဲ့အသဲကွဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ” အပိုင်း( ၁ ) …
မိုးရွာနေတဲ့ နေတစ်နေ့ “ မိုးကအရမ်းရွာနေတယ် computer သင်တန်းကလည်း အတန်းလွတ်ခန်းနီးမှာပေါ့ အချိန်က 2007 September6ရက်နေ့ညနေ 4:30 မိုးကုန်ခမ်းနီးမို့ ဆွေ့ဆွေ့မြေ့မြေ့ရွာနေတယ်” မိုးရေစက်တို့ကအေးလဲအေးတယ် .. ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့ မြောက်ဘက်မှတိုက်လာတဲ့ ဆောင်းလေတို့ကြောင့်“ဆောင်းကူးမိုး”လို့ ခေါ်ရင်လည်းရပါတယ် ..
“ ကျွန်တော်သင်တန်းစတက်တာ တပတ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ သင်ခန်းစာ သိပ်မရောက်သေးဘူး
ကောင်မလေး တစ်ယောက် သူနာမည်က အိလေးတဲ့ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က စာသိပ်မကွာဘူး ကျွန်တော်က သင်တန်းစတတ်တာ
နည်းနည်းစောတယ် .. သင်တန်းမှာ ဆရာမက အားလုံးပေါင်းလေးယောက်ရှိတယ် .. သူနဲ့ကျွန်တော်ကို သင်တဲ့ဆရာမက အတူတူ
ပဲ ဒါပင်မဲ့ ခုန်ချင်းတော့မတူဘူး .. ကြားထဲမှာ နှစ်ခုံလောက်ခြားတယ် .. ။
ဒါပင်မဲ့ တစ်နေ့မှာ ဆရာမက ကျွန်တော့်ကို စာခဏစောင့်နိုင်မလားလို့ မေးတော့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်တော်ကို စာအတူတူ သင်ပေးရင် ဆရာမလည်းသက်သာ .. အချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးသင်သွားလို့ရတာပေါ့ .. ဒါနဲ့ကျွန်တော့်ကို“သူ”စာမှီသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာမကကျွန်တော်နဲ့သူ့ကိုခုံချင်းကပ်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ဘေးကပေါ့ .. သင်တန်းသားတစ်ယောက်ခုံရွေ့သံကြားမှ ကျွန်တော်အတွေးစတို့ပျက်ပျယ်သွားတယ် .. “ ဟော သင်တန်းလွတ်ပြီ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ညာဘက်ဘေးကကောင်မလေး သိကစသူငယ်ချင်းပေါ့ .. စကားပြောရင်လည်း သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းလေးတစ်ပွင့် ဆင်ပြီးပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ် ..“ ကယ်သွားကြရအောင်” သူပြောလာတာပါ “ဟုတ်သားပဲအတန်းတောင်လွတ်ပြီ” ဒါနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သူ သင်တန်းဆင်းခဲ့ပါတယ် .. အဲ့ဒီအချိန်မှာ အပြင်မှာ မိုးတွေအရမ်းရွာနေခဲ့တယ်လေ “ အဲ့ဒါမှပြသာနာပဲ ကျွန်တော့်မှာ ထီးမပါဘူး” ကျွန်တော်မိုးရွာတော ထဲပြေးထွက်ဖို့ ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်မှာပဲ “သူ” ကျွန်တော့်ရဲ့သိကစ friend ပေါ့ “Hey ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလား you” ကျွန်တော်လည်းဘာပြောကောင်းမလဲ .. သူ့ထီးအောက်ကို ပြေးခိုခဲ့မိတာပေါ့ .. မိုးကအရမ်းရွာနေတယ် ..ထီးကမလုံဘူး ၊ သူ့ကိုမှာလဲရွှဲ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပေါ်မှာလဲ ရွှဲနေတယ်။ .. ငါ .. ရင်တွေအရမ်းခုံနေပါလား .. ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့် .. အော် .. ဒီလိုတစိမ်းမိန်းခလေးတစ်ယောက်နဲ့ မိုးရွာတောထဲမှာ ထီးတစ်လက်တည်းမပြောနဲ့ အပြင်မှာ တွဲသွားတွဲလာတောင်လုပ်ဖူးတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ..
ရင်တွေကခုန် အတွေးစတို့က ရောယှက်မွှေနှောက်လို့ ၊ ငါ့နှလုံးသားတွေ ရင်ခုန်စပြုလာပြီလေ.. ခက်တာတစ်ခုက ကျွန်တော်သူ့
ကိုအားနားနေတယ် .. သူနဲ့က အသားချင်းကပ်မလိုလိုတောင်ဖြစ်နေတာကို .. ကျွန်တော်သူကိုယ်ငွေ့လေနည်းနည်း …ကျွန်တော့်
ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေကို လာပြီဖုံလွှမ်းနေတယ် .. “ You ဘယ်ပြန်မှာလဲ” သူမေးလာတာပါ “အော် Friend ဒီလမ်းကပြန်မှာ” ဆိုပြီ 18 လမ်း ကိုညွှန်ပြလိုက်ပါတယ် ..ပြီတော်ကျွန်တော်က သူ့ကိုမေးလိုက်ပါတယ် “Friend ကကောဘယ်ပြန်ရမှာလဲ” ကျွန်တော်စကား
မရှိစကားရှာပြီမေးလိုက်ပါတယ် သူက .. “ အလုံပြန်ရမှာ” သူအလုံမှာနေတာကျွန်တော်သိတာပေါ့ .. ဟိုနေ့မသိခင်ကတည်းကိုက
မေးကြည့်ခဲ့ပြီသားပါ .. ရင်ခုန်သံတွေ .. ဗျောင်းဆန်နေလို့ ဘာမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးဗျာ .. အော်ဒါအချစ်တဲ့လား .. ငါအချစ်
ဆိုတာကိုရှာတွေ့ပြီ … ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ .. “ငါ့ကိုသွားခွင့်ပြုပါ” တဲ့ .. ဆိုပြီသူထီးအောက်ကပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ် ….
မိုးရွာတောထဲပြန်လာရပင်မဲ့ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်တယ် ၊ ဒါဟာအချစ်တဲ့လား အချစ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ဘာလဲ ရင်ခုန်ခြင်းတွေလား
ပျော်မြူးခြင်းတွေလား ဆိုတာတော့ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းမသိပါဘူး ဒါပင်မဲ့အခု လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် ရင်ခုန်ခြင်း
တွေနဲ့ အချစ်ကိုစတင်နေတယ်လေ …။ အင်း … မအိပ်ပဲနဲ့စဉ်စားလိုက်တာညတော်တော် ညည့်နက်တယ် ..ပြီမှ အိပ်ပျော်သွား
တယ် …..။ မနက်မိုးလင်းတော့ လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ် Breakfast စာပြီး သင်တန်းသွားရမဲ့ 2:30 pm ကိုမျှော်နေမိပါတယ် ..၊
ခါတိုင်းဆို သင်တန်းသွားရမှာ ပျင်းတဲ့ ကျွန်တော်အခု ဘာဖြစ်လို့ နာရီတကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေရတာလဲ .. ငါဘာဖြစ်နေတာလဲ
သူ့ကအရမ်းလှတာပဲနော် .. ဘာကြောင့် .. ငါ့နှလုံးသားကိုဖမ်းစားခဲ့တာလဲ မိန်းခလေးရယ် .. ငါ..ဘယ်လို .. ရင်ခုန်သံတွေကို
အသက်သွင်းရပါ့မလဲ .. ငါ့ရင်ထဲကစကားလုံးတစ်ချို့မင်းကို ပြောပြရင် မင်းနားထောင်နိုင်ပါ့မလား ..
Posted by mhyaw lint at 7:35 PM
Labels: ကျွန်တော် စခဲ့တဲ့ရင်ခုန်ခြင်းအသဲကွဲဇာတ်လမ်း
Myanmar family မှသူငယ်ချင်းများနှင့် ဆုံဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့(၁)
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့(2 Aug 2008 )ညနေမြေနီကုန်းမှာ တွေ့စုံခဲ့ကြပါတယ် ။ ကျွန်တော်နှင့် “DuDu-13” ဟာ ဟဲလပင်မှတ်တိုင်းမှာ တွေ့ဖို့ချိန်းခဲ့ကြပါတယ် ။
“ကျွန်တော်ဟဲလပင် မှတ်တိုင်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာ “DuDu-13” ဟာကျွန်တော်ကိုစောင့်နေပါတယ် ဒါပင်မဲ့”DuDu” ကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါ၊ လူတစ်ယောက် လူအများကြီးတည်းမှ ကျွန်တော်ကို ရီပြနေပါတယ်၊ ဒါပင်မဲ့ ကျွန်တော်ကိုလဲ မခေါ်ဘူး ………… ဘာလို့ဘာလိမ့် DuDu မဖြစ်လောက်ဘူးဟု
ယူဆကာ ကျွန်တော်ကျောချမ်သွားပါတယ်၊ ယောင်္ကျားကြီးတစ်ယောက်က ရီပြီတော် ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာ တစ်မျိုးကြီးပဲ …….. အင်း DuDu ငါ့ကိုပြောတော့ လိမ္မော်ရောင်country shirt ၀တ်လာမယ်တဲ့ ။ အင်း သူက အင်္ကျီကတော့ဟုတ်ပါတယ် ဒါပင်မဲ့ အရောင်က လ်ိမ္မော်ရောင်ဆိုတော့ အ၀ါရောင်လို့ တွေးကာ ……… ဒီကောင်ငါ့ကိုဘာလို့ကြည့်နေရတာလဲ “DuDu-13” ဆိုလဲငါ့ကိုခေါ်မှာပဲ ပြီတော် ငါဘာဝတ်လာမလဲဆိုတာလဲပြောပြီးသာလေ
ဒုက္ခပဲ ……. အာ…….. သွားမေးကြည့်တာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး အတွေးစကိုဖြတ်ကာ …….. မေးလိုက်တော့ ကျွန်တော် DuDu-13 ပါတဲ့ …….. ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြစ်တွေပြောပြီး မြေနီကုန်း လောကနတ်လက်ဖက်ရည် ဆိုင်သို့လာခဲ့ကြပါတယ် ……..
ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီ မကြာပါဘူး “ကောင်းမြတ်” ရောက်လာပါတယ် ….. ဒါနဲ့ကောင်းမြတ်ကိုအမောပြေ ရေနွေးတစ်ခွက်ငဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ် ……. ကျွန်တော်
တို့ဟာ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးကြပါဘူး …… ဒါပင်မဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းတွေလိုခံစားမိပါတယ် …… အခုဆို “ကောင်းမြတ်” “DuDu-13” ကျွန်တော”Mr.ကိုပေါ”စုစုပေါင်း သုံးယောက်သာရောက်ပါသေးတယ် ………. စိတ်မရှည်တစ်ရှည်နဲ့နောက်လူတွေ လာမှ လာပါ့မလားလို့ မျှော်ရတာပေါ့ ဒါပင်မဲ့
“ဟင်းလင်းပြင်”ကိုတော့ လာမှာပဲဆိုပြီ မျှော်နေခဲ့မိပါတယ် ……. နောက်ရောက်လာတာက “ အာကာမောင် “ “နေမင်း “ “ကိုဂျစ်တူ” ပြည့်စုံ “အောင်အောင်
Posted by mhyaw lint at 8:24 AM
Labels: သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ပုံ